Ukunyibilika kwabavelisi beoksijini - China Ukunyibilika Oxygen Factory kunye nababoneleli
I-DOS-118F yeLebhu inyibilike isivamvo seoksijini
Uluhlu lokulinganisa: 0-20mg / L
Ubushushu bamanzi obulinganisiweyo: 0-60 ℃
3.Electrode iqokobhe izinto: PVC
I-DOS-1707 Laboratory ichithwe iMeter oksijini
Inqanaba le-DOS-1707 ppm ephathekayo Imitha ye-Oxygen yeDesktop yenye yezihlalutyo ze-electrochemical ezisetyenziswa elabhoratri kunye nokubeka esweni okuthe kratya kokuqonda okuveliswa yinkampani yethu.
I-DOS-1703 ephathekayo inyibilike imitha yeoksijini
I-DOS-1703 ephathekayo inyibilike imitha yeoksijini ibalasele kwimilinganiselo yokulawula kunye nokulawula amandla asezantsi, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukuthembeka okuphezulu, imilinganiselo ekrelekrele, kusetyenziswa imilinganiselo ye-polarographic, ngaphandle kokutshintsha inwebu yeoksijini. Ukuba nokusebenza okuthembekileyo, okulula (ukusebenza ngesandla esinye), njl.
I-DOG-3082 yeemitha ze-Oxygen zeMizi mveliso
I-DOG-3082 ye-Intanethi echithwe kwi-Oxygen Meter sisizukulwana sethu samva nje esine-microprocessor esekwe kubukrelekrele kwimitha yomgca, ngesiboniso sesiNgesi, ukusebenza kwemenyu, okrelekrele ophezulu, imisebenzi emininzi, ukusebenza komlinganiso ophezulu, ukulungelelaniswa kwendalo kunye nezinye izinto, ezisetyenziselwa Ukuqhubeka kokubekwa kweliso kumgca. Inokuxhotyiswa nge-DOG-208F Polarographic Electrode kwaye inokutshintsha ngokuzenzekelayo ukusuka kwinqanaba le-ppb ukuya kwinqanaba le-ppm yemilinganiselo ebanzi. Esi sixhobo siyilelwe ukujonga umxholo weoksijini kumanzi okuhambisa amanzi kwibhoyila, ukuhambisa amanzi kunye nogutyulo.